Maitiro ekugadzirisa ako mbeva mabhatani muPOSOS | IPhone nhau
Maitiro ekugadzirisa ako mbeva mabhatani pane iPadOS
Nekuvhurwa kwePadOS 13.4 kunouya mukana wekubatanidza mbeva uye trackpad kune yako iPad, inova nhanho huru kune avo vachiri kuona mukana wekuchinja komputa yavo yeApple piritsi. Asi kuenderana uku kunoenderera zvakanyanya uye inotibvumidza isu kumisikidza akasiyana mbeva mabhatani uye kunyangwe kushandisa echinyakare inoshanda makona of macos
Kana iwe uine trackpad uye wobva waibatanidza kune yako iPad, unogona kushandisa kuruboshwe uye kurudyi kudzvanya uye kupururudza, uye iwe zvakare uchave uine yakanaka ruoko rwezviratidzo izvo zvinoita kuti basa rinyanye kuve nyore kana uchivhura slide pamusoro, kuvhara application, kuchinja between apps or open multitasking. Iine mbeva, zvese hazvina kunyatsogadziriswa, nekuti mabhatani ayo maviri haape zvakanyanya. Asi Mumusika mune akawanda mamodheru anosanganisira akawanda mabhatani uye ayo isu tinokudzidzisa iwe kumisikidza pane yako iPad uchishandisa imwe yeakanakisa mbeva pamusika, iyo Logitech MX Master 3.
iPadOS inokutendera gadziridza zvinhu senge saizi uye ruvara rweiyo pointer, kana kutowedzera musiyano wayo kuti uone zviri nani. Izvo zvakare zvinokutendera iwe kuwedzera muganho kwairi neruvara iwe rwawakaisa, uye kugadzirisa saizi yemuganhu iwoyo kune avo vane matambudziko ekuona. Kugadziridza kumhanya kwekumhanyisa kana iri bhatani rine kechipiri kudzvanya kwekusara ndedzimwe sarudzo dzekutanga dzatinowana pakati pegadziriro dzehurongwa.
Asi zvakare, kana tikakwanisa kuwana iyo yekuwanika menyu, tinogona kugadzirisa ese mabhatani ayo edu iPad anoaziva kubva mbeva yedu, mune yangu anosvika mashanu mabhatani. Chivabvu l gadzira bhatani kuti uende kudesktop, imwe yekuvhura multitasking, yakasiyana kutora skrini, nezvimwe. Kunyangwe ukarasikirwa nemakona anoshanda e macOS, unogona kumisikidza makona eiyo iPad yako kuti zviito zviitwe kana iwe ukaisa iyo sarupu pavari. Tichatsanangura zvese izvi kwauri muvhidhiyo iyi izvo zvinonyatso kukubatsira iwe kugadzirisa mbeva yako kuti uwane zvakazara mairi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 13 » Maitiro ekugadzirisa ako mbeva mabhatani pane iPadOS
Apple inosimudza iyo inorambidzwa pakutenga anopfuura maviri maPhones nenzira imwecheteyo
Inotevera Apple TV ichave inosvika pa128GB uye neMwana Mode